Ifulethi elimangalisayo "Ngubani oyithandayo" - I-Airbnb
Ifulethi elimangalisayo "Ngubani oyithandayo"
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguPavel
Le ndlu yindawo yokuhlala yabucala yabakhenkethi, abakhenkethi abaqeqeshiweyo, abafayo, okanye abantu abajonge ukucotha. Kubahlali beBremen abacinezelekileyo, ikwafanelekile njengendawo yokuhlala njengenxalenye yolonwabo lwasekhaya.
Indawo yokuhlala ibekwe e-Oldenbüttel (Hambergen), ejikelezwe ziimoors kunye namahlathi, kwisitrato esisecaleni esizolileyo. Emva kwendlu unokuhlala kamnandi egadini ukuze uphumle, okanye ubukele iigusha neenkomo. Indlu ikumgangatho wokuqala wendlu, icoceke kakhulu kwaye inothando, intsha kraca. Impahla ibandakanya iibhedi ezi-2, indawo yekhitshi exhotyisiweyo ngokwaneleyo, enekhitshi elitsha kraca eliquka ihob, ifriji, imicrowave, umenzi wekofu, iketile kunye nezitya. Le ndlu ikwanegumbi layo lokuhlambela elitsha elineshawa kunye nendlu yangasese. Iimpawu ezongezelelweyo ziquka iTV entsha kunye neWiFi.
Ukusuka kwifestile yendlu, ukusuka kwitafile encinci yokutyela, unombono onomtsalane wohlaza, umyezo onemithi emikhulu, idlelo elineenkomo neegusha, kunye nehlathi elihle ngasemva. Indawo ilungele ukuhamba nge-moor, ukukhwela ibhayisekile kwindawo ekufutshane kunye nendawo ejikelezileyo, apho unokuhlala ufumana into enomdla kwaye intle, njengelali yamagcisa eWorpswede, okanye iTeufelsmoor kunye nezinye iindawo ezintle ezisemaphandleni. idyll. Zombini isixeko saseBremen naseBremerhaven sinokufikelelwa kwisiqingatha seyure ngemoto okanye ngololiwe. Kukho unxibelelwano olulungileyo lukaloliwe apha, malunga nemizuzu eyi-10-15 ngeenyawo, nakwibhasi. Ungapaka esitratweni, kanye phambi kwendlu.
Iivenkile - imizuzu emi-5 ngemoto. Kukho umzekelo: Edeka, Aldi, Penny, Lidl, ikhemesti, isikhululo segesi.
-Ukutshaya endlwini akufuneki (kukho negadi apha)
- Ndiza kukucela ukuba usebenzise iziliphu zakho ejikeleze indlu
Ich bin aufgeschlossen, herzlich und komme so gut wie mit jedem aus.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hambergen